SahayatraTV -Nepal News Portal, Business, Hot News, Interview, Opinions, Politics, Science, Technology, Social, Media, Sports, Youth, Model Watch, Movies
काठमाडौँ । असार २२, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो एक बजे हुने माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ । आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको पोलिट्ब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको प्रस्ताव गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौँ । असार २१, रामेछापमा यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार हिलेदेवीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा.३ ख ८३९६ नम्बरको बस रामेछापको सुनापती गाउँपालिका–५ र खाँडादेवी गाउँपालिका–१ को सिमानामा आज बिहान बस दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा २४ जना घाइते
काठमाडौँ । असार २२, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो एक बजे हुने माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ । आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष
एकीकृत समाजवादीले साउन पहिलो साता जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने
गण्डकी प्रदेश सभा बैठक बस्दै, बजेटमाथि छलफल हुने
काठमाडौँ । असार १७, खोटाङमा ५ वर्षकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ परेका छन् । गत १४ असारमा नाबालिकालाई बाख्राको खोरमा लगेर मुख थुनेर जबर्जस्ती करणी गर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका ४ बाक्सिलाका १६ वर्षीय केपिलासगढी
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भिख माग्न निषेध
काठमाडौँ । असार १७, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । महानगरपालिकाले सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा
काठमाडौंको कालिमाटीमा एक व्यक्तिमाथि चक्कु प्रहार, २ जना पक्राउ
काठमाडौँ । असार १४, काठमाडौंको कालिमाटीमा चक्कु प्रहार गरी एक व्यक्तिलाई घाइते बनाएको आरोपमा २ जना पक्राउ परेका छन्। चक्कु प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोपमा
दिल्लीबाट उडान भरेको स्पाइसजेटको विमान आपतकालीन अवतरण
आज मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन
धान रोपाइँ सुरु
काठमाडौं आफै बसन्त बोलाउँछ
विदेशी पर्यटक बढे
लेकसाइटमा तस्वीर कैद गर्दै भारतीय पर्यटक
काठमाडौँ । असार २२, नेपाल र घरेलु टोली क्यानडाबीचको पहिलो एकदिवसीय रद्द भएको छ । किङ सिटी स्टेडियममा तय खेल वर्षाको कारण रद्द भएको हो
काठमाडौँ । असार १५, झापा गाउँपालिकामा विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्न ६३० घर निर्माण गरिएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम तथा दिगो समुदाय परियोजनाअन्तर्गत
डा. सुर्य राज आचार्य एवं डा. बाल मुकुन्द रेग्मी संग गरिएको : सहयात्रा सम्वाद (भिडियो)
१२ वर्षमा पुल तयार
पूजाले फेरिन् बोली
काठमाडौँ । असार २०, बोल्न नजान्दा नायिका पूजा शर्मा विवादमा तानिने गर्छिन् । दर्शकबाट पाएको
अश्लीलता बढेको भन्दै प्रतिष्ठानले बोलायो रोधीघर सञ्चालक र गायक गायिकालाई
काठमाडौँ । असार १८, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानले लोकदोहोरी गीतमा अश्लील शब्दको प्रयोग गरेको
रानी र बलको गीत म डुब्दै गएँु
काठमाडौँ । असार १८, गायिका रानी शाक्य र गायक बलबहादुर राजवंशीको स्वरमा रहेको गीत ‘म
डा. युवराज संग्रौला संग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै : अन्तर्वार्ता
नीजि सञ्चार संस्था खोलेर कैंयौलाई रोजगारी दिएकी महिला उद्यमी चन्दा घिमिरे
“सफल नारी” कार्यक्रममा – चन्दा घिमिरे
झापा । असार २१, पूर्वीनाका काँकडभिट्टा भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात बढी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सो नाका भएर रु आठ अर्ब ६७ करोड २० लाख
काठमाडौँ । असार २०, नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा
काठमाडौँ । असार २०, मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइए पनि यसका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने घटेको छ ।
काठमाडौँ । असार १७,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आइएक्स मार्केटमा एक महिनामा प्रतिस्पर्धी दरमा १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरेको
संसारकै महंगो पनीरःगधाको दुधबाट
काठमाडौँ । असार २०, तपाईले स्वादिलो मानेर खाने पनीरको मूल्य कति छ रु धेरैमा किलोको हजार रुपैयाँ तर संसारमा यस्तो पनीर पनि पाइन्छ, जसको मूल्य
संसारकै ठूलो माछा कम्बोडियामा भेटियो
टीकापुर । असार २१, कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा ‘जनरल सर्जरी सेवा’ सुरुआत भएको छ । सुविधासम्पन्न अस्पताल भएर पनि विशेषज्ञ नहुँदा बिरामी समस्यामा पर्दै आएका थिए
उपत्यकामा १७ जना पुगे बिरामी
बढ्न थाले कोरोना संक्रमित
काठमाण्डौ । ज्येष्ठ १०, सहयात्रा सम्पादकीयः सरकारले इन्धनको मूल्य पुन: बढाएर अर्को कृतिमानी कायम गरेको छ । हालै पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ बृद्धि
निर्वाचन खर्च भ्रष्टाचारको नमुना